အရွယ်မရွေး …… လှပစေဖို့ ……. ဝန်ဆောင်မှုပေးတာ …... Ginger
MRTV-4 ပရိသတ်များရှင် ….. လှပတဲ့ မျက်နှာ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာ အလှအပ ရှုထောင့် ကပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့် ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပါ။ မျက်နှာ နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ မှာ အဆီပို မရှိဘဲ အချိုးကျ လှပ ဖို့ဆိုရင်တော့ သင့်တင့်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင် စားသောက် ပြီး အသားအရည် နဲ့ ခန္ဓာ ကို နည်းစနစ် ကျစွာ ထိန်းသိမ်း မှသာ အလှတွင် အယဉ်ဆင့် ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိစွာဖြင့် လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး စသည့် လူမှု ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင် ပါတယ်……..။ ဒီလို အသက် အရွယ် မရွေးလှပတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား လှပမှုကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့ Ginger က ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်…..။ အလှအပဆိုင်ရာ အချက်အလက် များသည် အမျိုးသမီးများ ၏ ….ဘဝ အတွက် အထူး အရေးပါတဲ့ အပိုင်း ကဏ္ဍ လည်း ဖြစ်တာမို့ အလှအပကို စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် အထောက်အကူ အဖြစ် လေ့လာ နိုင်စေရန် Ginger မှ တာဝန် ရှိသူနဲ့ အခုလို တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ……။ မေး - မင်္ဂလာပါ အစ်မ။
ဖြေ - စွဲမြတ်ဟေသီ - မင်္ဂလာပါ အစ်မ။
အစ်မတို့ ဒီ Ginger မှာ ဝန်ဆောင်မှု ဘယ် နှစ်ခု လောက်ရှိလဲ….. အစ်မ။ ကျွန်မတို့ ဆီမှာ ပုံမှန်အားကစားသင်တန်း ၊ ခန္ဓာကိုယ် အဆီချ ပေးတဲ့ လုပ်ငန်း နဲ့ မျက်နှာ အဆီချ ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဆို ပြီး အဓိက ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (၃) မျိုး ရှိပါတယ်..
အမတို့ GINGER ရဲ့ ပုံမှန် အားကစား သင်တန်း အကြောင်း ပထမဆုံး ပြောပြ ပေးပါအုံး… ပုံမှန်အားကစားသင်တန်း မှာ..၀လိုသူ ၊ ပိန်လိုသူ ၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကျ လှပလိုသူ တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး သက်သက် ကစားလိုသူ စ သဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်…ကျွန်မ တို့က သူတို့ရဲ့ ၀လိုတာ ပိန်လိုတာ.. ကျန်းမာရေး သက်သက် ကစားချင်တာ ပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ ရဲ့ လိုအပ်ချက် တွေကို ကြည့်ပြီး စနစ်တကျသင်ကြား ပြသ ပေးပါတယ် ….
ဒါဆိုရင် ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတယ်ဆိုတာ … ဘယ်လို နည်းလမ်း တွေနဲ့ ချပေးတာလဲ… အဆီချပေးတဲ့ အကြောင်း လေး ကိုလဲ ရှင်းပြ ပေးပါဦး ရှင့်။ ကျွန်မတို့ ဆီမှာ ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချ တာက… Massage နဲ့ ချတာ…Steam …ပေးပြီးချတာ…Vibration နဲ့ ချတာ…Frequency နဲ့ ချတာ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်…လာတဲ့သူ အမျိုးမျိုး ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ကို ကို ကြည့် ပြီး ..လွယ်တဲ့ သူဆို ပုံမှန် နည်း …ကျဖို့ ခက်တဲ့လူကို တခြားနည်း အမျိုးမျိုး သုံးပေးပြီး ချပေးတာပါ…. ဘယ်လို လူဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ ဆိုင်ကို ယုံကြည်လို့ လာတယ်ဆို ကထဲက…ကျွန်မတို့ တာဝန်မှာ..အဲဒီလူ ကျကို ကျရမယ် ဆိုတာပါဘဲ… ဒါပေမယ့် လာ လုပ်တဲ့လူတွေ ဘက် ကတော့ အဆီများတဲ့ ဟင်းအဆီအနှစ်တွေ၊ အချို
ရည် ၊ ရေခဲရေ ၊ Gas အချိုရည် စတာ တွေ ရှောင်ဖို့ နဲ့ မလိုအပ်ဘဲ အဆာပြေ ၊ အပျင်းပြေ ခဏ ခဏ စားတာ ကို ရှောင်ဖို့ လိုပါ တယ်။
ဒါဆိုရင် ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတဲ့အကြောင်းလေးကိုလဲ ရှင်းပြပေးပါဦးရှင့်။
ဆေးလိမ်းပြီး စက်နဲ့ချတယ်ဆိုတာက အရင်ဆုံးကိုယ်ကျချင်တဲ့နေရာကို အဆီကျဆေးလိမ်းရတယ်။ လိမ်းပြီးရင်Massage လုပ်ရတယ် ပြီး ရင် Vibration စက်နဲ့ဆွဲပါတယ် နောက်ပြီး လုပ်တဲ့လူတွေဘက်ကလည်း အဆီများတဲ့ ဟင်းအဆီအနှစ်တွေ၊ အချိုရည်၊ ရေခဲရေ၊ Gas အ ချိုရည် စတာတွေရှောင်ရပါတယ် နောက်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ အဆာပြေ၊ အပျင်းပြေ ခဏခဏစားတာကို ရှောင်ရပါတယ်။
ပုံမှန် ကစားတာနဲ့ ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတာ မှာ ၊ ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတာက ပိုပြီး မြန်မြန် ကျတာပေါ့နော်…..။ အဲ့ဒါ ကတော့ ကစားပြီး အဆီချတာက အရမ်း ဝတဲ့သူ ဖြစ်ဖြစ်၊ အနေတော် ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိုက်ကစားရင်(၁၅) ရက်မှာ ၁ လက်မ ၊ ၁ လက်မခွဲဟာ အလွန်ဆုံးပါပဲ….. ဆေးလိမ်းပြီး စက်နဲ့ အဆီချတာက ပုံမှန် ခန္ဓာကိုယ် ဆိုရင် (၁၀) ရက် မှာ ၃ လက်မ ၊ ၄ လက်မ လောက် အထိ ကျနိုင်ပြီး အရမ်းဝတဲ့ Over Weight ဗိုက်အိုး အကြီးကြီးတွေ ဆို (၁၀) ရက် မှာ ၇ လက်မ ၊ ၈ လက်မ အထိ ကျ နိုင်ပါတယ်။
Ginger မှာ လာ အဆီချတဲ့ သူတိုင်းကို ကိုယ် ပြောသလောက် ကျမယ် လို့ အာမခံပေးနိုင်လား…… အကယ်၍ မကျခဲ့ရင် ရော အစ်မတို့ အနေနဲ့ တာဝန်ယူ ပေးတာမျိုးရှိလား …. ကျွန်မတို့ ဆီမှာ လူတစ်ယောက်က စုံစမ်းပြီး တကယ် လုပ်တော့မယ် ဆိုကတည်းက သူ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သူ့အရပ်ကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ ဒီ ခန္ဓာ ကိုယ်လောက် ဆို ၃ လက်မ ကျနိုင်တယ် ၊ ၄ လက်မ ကျနိုင်တယ် ….. စသဖြင့် ကြည့်ပြီးပြောပေးပါတယ်…...။အဲဒီ အတောအတွင်းမှာ သူ့ ဘက် ကလည်း ရက် မပျက်ရဘူး…. ရက်ပျက် လို့ မကျတာ ဆိုရင် တာဝန်မယူပါဘူး….။ သူ့ဘက်က မှန်မှန်လာလျက်သားနဲ့ ကျွန်မက ၃ လက်မ ပြောလိုက်ပြီး (၁၀) ရက် ပြည့်သွားလို့ ၂ လက်မ ပဲကျတယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ၂ လက်မ ခွဲ ပဲကျတယ် ဆိုရင်…. ကိုယ်ပြောထား တဲ့ အတိုင်း ၃ လက်မ ကျတဲ့အထိ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးပါ တယ်…..။ အဲ့ဒီလို တာဝန်ယူ ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျွန်မတို့ ဘက်က မဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့ အများကြီး ကျနိုင်မယ် မပြောပေးပါဘူး…..။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့ ဘက် က တာဝန် ယူနိုင်သလောက် ကိုပဲ ပြောပေးပါတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ အစ်မအနေနဲ့ ပုံမှန်ကစားတာနဲ့ အဆီကျဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတာ ဘယ်ဟာပိုသင့်တော်တယ် ထင်ပါသလဲ။
အဲ့ဒါကျတော့ သူ့မှာမြန်မြန် ပိန်ချင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာဘာရှိလဲပေါ့၊ ဥပမာ မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့လား၊ ဘွဲ့ရှိလို့လား၊ နိုင်ငံခြားသွားဖို့စတဲ့သူမျိုးလားပေါ့ အဲ့ဒီလိုမျိုး တပွဲထိုးပိန်ချင်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ အဆီကျဆေးလိမ်းပြီး စက်နဲ့အဆီချတာက ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ လို မဟုတ်ဘဲ အဓိကမှန်မှန်ပဲ ပိန်ချင်တယ်၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမယ်၊ Stress လည်း လျှော့ချင်တယ်၊ လှုပ်ရှားမှုလည်း ရှိချင်တယ် ဆိုရင် တော့ ပုံမှန်ကစားသွားတာကောင်းပါတယ်။ တစ်မျိုးစီပေါ့။ သူ့အတွက် ပိန်ချင်တဲ့အရာက ဘယ်လောက်အထိ အလျှင်လိုလည်းပေါ် မူတည်ပါတယ်။
တချို့ကျတော့ ဝလို့မဟုတ်ဘူး…. ပိန်တယ်….။ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား လှဖို့ ဆိုပြီး ကစားတယ်…. ကစားနေတဲ့ အချိန်မှာ ပိန်တယ်…. ရပ်လိုက်ရင် အပေါ်ပိုင်းကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့….။ အဲဒီလိုမျိုး ကျတော့ ကစားတဲ့ နည်းစနစ်ကမှားလို့လား…..။
ကစားတာ ကျတော့ တက်ချင်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျချင်တာ ဖြစ်ဖြစ် အဓိက ကိုယ် တက်ချင် ကျချင်တဲ့ နေရာကို စိတ် ထည့် ရပါတယ်။ ဥပမာ ကျောကုန်း ကျချင်ရင် ကျောကုန်း အဆီကျချင်တဲ့ နေရာကို စိတ်ထည့်မယ်… အဲဒီ အခ်ျိန်မှာ ကျချင်တဲ့နေရာကို စိတ်မထည့်ဘဲ လက် မောင်းကို စိတ်ထည့်မိရင် လက်မောင်း တွေကြီး လာ မယ်… .ပခုံးတွေကျယ်လာမယ်… ရင်အုပ်တွေ ကြီးလာနိုင်တာမို့ ကိုယ်တက်ချင် ကျ ချင်တဲ့ နေရာကို စိတ်ထည့် ပြီး ကစားတတ် အောင် သင်ပြပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်….စနစ်တကျနဲ့ လေ့ကျင့်ကစားရင်မကြီးပါဘူး။
အဆီလာ ချတဲ့သူတွေ ကို အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ကျနိုင်ဖို့ အမတို့ ဘယ်လို တာဝန်ယူ ပေးပါ သလဲ….အဆီချချင် တဲ့ သူ
တွေ ကို အဆီချတာ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ကို ရော ကြိုတင် ရှင်းပြ ပေးပါသလား…… အဆီချတယ် ဆိုတာကို လုပ်ပုံလုပ်နည်း သိရင်ပြီးရော ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး….ကျွန်မတို့ဘက်က အချိန် ယူ အများကြီး လေ့
လာ ခန္ဓာ ကိုယ် အမျိုးမျိုးကို အခမဲ့တွေ အများကြီး လုပ်ပေး ၊ အတိုင်းအထွာ တွေ Record ယူ ပြီး ကိုယ့်ဆီ လာတဲ့သူ အန္တရာယ် ကင်း ကင်း နဲ့ အမှန်တကယ် ကျအောင် တာဝန်ယူ ပေးနိုင် မှ. .လက်ခံ… ဆောင်ရွက် ခဲ့ တာပါ…ကျွန်မတို့ဆီကို အဆီလာ ချတဲ့ သူတိုင်းကို ရောဂါရှိ မရှိနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ရာဇ၀င် ကို အစအဆုံး အသေးစိတ် မေးမြန်းပြီး..ကျွန်မတို့ တာဝန်ယူနိုင် မှ..လက်ခံ ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်…. နှလုံး ခွဲစိတ်ထားတဲ့သူ.. စက်တတ်ထားတဲ့သူ….ကိုယ်လက် အင်္ဂါ ကလီစာ တစ်ခုခု ဖြတ်တောက် အစား ထိုးထားတဲ့သူ မျိုးဆို လုံးဝ မလုပ်ပေး ပါဘူး…...ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေး မွေးထားတဲ့ သူဆိုရင် လည်း အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ် ရှိ မှ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးပါ တယ် ၀န်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ ကလေးတွေ ကို …Massage လုပ်ရင် ဗိုက်ပေါ် ရိုက်လို့ ၊ နှိပ်လို့ မရတာက အစ သေးစိတ် သင်ကြားပေးထား ရပါတယ်…. နောက်ပြီး… အလျှင်အမြန် ပိန်ချင်လို့ ..အဆီချ ကော်ဖီ ၊ လက်ဖက်ခြောက် စတဲ့ ပိန်ဆေး အနွယ်ဝင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး သုံး မယ် ဆိုရင်လည်း အိပ်ရေးပျက်မယ်.. မျက်တွင်းကျမယ်.. ပါးရိုးကျမယ်… ရင်တုန်မယ်.. ၀မ်းချုပ်၊ ၀မ်းလျှော မယ်.. စိတ်ကယောက် က ယက်ဖြစ်တတ်တယ်…စတဲ့ Side Effect ကို ကြိုတင် ရှင်းပြ ပေးရ ပါတယ်… … နောက် တစ်ခု က Souna လိုမျိုး ချွေးထုတ်တာကို နေ့တိုင်း မလုပ်သင့် တာမျိုးက အစ …. နေ့ တိုင်းသုံးရင်..ခန္ဓာ ကိုယ် က ချွေးတွေ အများကြီး မလိုအပ်ဘဲ နေ့တိုင်း ထွက်ရတဲ့အတွက် ရေ ဓာတ်တွေ ဆုံး ရှုံးပြီး… အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာမျိုးက အစ သိထား သင့်ပါတယ်….တစ်သက်လုံး မဆင်မခြင်စားခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ချပြီ ဆိုမှ ဗြုန်းစား ကြီးကျသွားချင်လို့ မရပါဘူး…ဇွဲရှိဖို့ ၊ အချိန်ယူဖို့…စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပြီး အစား ဆင်ခြင် ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ 
ဒီ အလုပ်တွေက သဘာဝကို လွန်ဆန်ပြီး လုပ်တာ ဖြစ်သလို ကျန်းမာရေး နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး အမှား နည်း
အောင် ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ အတွက်....Internet မှာလည်း ကြိုတင်လေ့လာနိုင်အောင် အဆီချချင်တဲ့ သူတွေ ရော၊ ကစားချင်တဲ့ သူတွေအ
တွက် ပါ…စီစဉ်ပေးထားပါတယ်.....…. website - http:// www.gingerbeautyland.com ကို ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်.....
ဆိုင်ရဲ့ တခြားဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ မျက်နှာအဆီချ ၀န်ဆောင်မှု အကြောင်း နဲ့ အစ်မတို့ စဇွင့်တုန်းက GINGER အားကစား
သင်တန်းကနေ မျက်နှာအဆီချတဲ့ လုပ်ငန်း အထိ အဆင့်ဆင့် တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပုံလေး ရှင်းပြပေးပါအုံး ။
GINGER မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် ပြီး ခန္ဓာ ကိုယ် အချိုးကျ လှပ လိုသူ တွေ အတွက် ပုံမှန် အားကစား သင်တန်း ကို 2005 မေလ (၁) ရက် နေ့ မှာ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါတယ်….ထိုမှ တဆင့် လုံးဝ အပင်ပန်းမခံနိုင် ၊ အချိန် မပေး နိုင် သူတွေ အတွက် အထူး အာမခံ နဲ့ အဆီချ လုပ်ငန်း ကို 2007 စက်တင်ဘာလ မှာ စတင်လေ့ လာ ဆောင် ရွက် ခဲ့ ပြီး 2011 မတ်လ မှ စပြီး… မျက်နှာအဆီချ ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသ မီးတွေ ၀ လာရင် သို့ အသက် အရွယ် တစ်ခုရလာရင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လျော့ရဲ လာတဲ့ မျက်နှာ လာတဲ့ မျက်နှာပြင် ၊ ပါးရိုးနှစ်ထပ် ၊ မေးစေ့ နှစ်ထပ်ပိုတွေကို ခွဲစိတ် ရန် မလို ၊ ဆေးထိုး ဆေး သောက်ရန် လည်း မလိုဘဲ.. .အန္တရာယ် မရှိတဲ့… Skin Care တွေ ၊ Massage တွေ ၊ Facial လုပ်တဲ့ စက် တွေ နဲ့ အဆီကျ လှပအောင် ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ် …မျက်နှာ အဆီချတာမှာ ရိုးရိုး အဆီချ တာနဲ့ ….မျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံး တင်းရင်းပြီး အသားအရည် ပါ သိသိသာ သာ ကြည်လင် နုပျို လာစေမယ့် Special Treatment ပါတဲ့ အဆီချ Package တွေ ….. ကို ပါ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်။
အမတို့ဆိုင်က အမျိုးသမီးတွေ အတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အလှအပ ၀န်ဆောင်မှု တွေ အမျိုး မျိုး တွေ့ ရတာမို့ ဒီ ၀န်ဆောင်မှု တွေ ၀န်ဆောင်မှု ပေးတာက ရော…အမ ကိုယ်တိုင် နားလည် တတ်ကျွမ်း ပြီး ဆောင် ရွက် ပေးတာ လား ……ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင် တဲ့ သူတွေကို ခေါ်ယူပြီး လက်ခံ ဆောင်ရွက် ပေးတာလား…
ကျွန်မ လုပ်ကိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း မှန်သမျှကို ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် လေ့လာပြီး…နားလည် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိမှ တာဝန်ယူ နိုင်မှ ဆောင် ရွက်ပေး တာပါ…ကျွန်မတို့ ဆီမှာ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ မှန်သမျှက လည်း တတ်ပြီး သား လာတာ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ အစိမ်းတွေ ကို ၀န်ဆောင်မှု အပြင် Customer Service နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူမှု ဆက်ဆံရေး ၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း တွေ ကအစ ကျွန်မ ကိုယ်
တိုင် သေချာ..လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပြီး.. စိတ်ချရမှ Customer ကို ဆောင်ရွက် ခွင့်ပေးတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့… အမက အလှ အပနဲ့ ရော..ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက်တာ တွေ ပါ အသေးစိတ် နားလည် တဲ့ သူ…. . ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမ ကိုယ်တိုင် အတွက် … ခန္ဓာ ကိုယ် အလှအပ ၊ မျက်နှာ အလှအပ တွေ ကို ဘယ်လို ထိန်း သိမ်း သလဲ ပြော
ပြပေး ပါအုံး ။ ဟုတ်ကဲ့ ပါ….ကျွန်မ တို့အလုပ် က အလှအပ ၀န်ဆောင်မှု တွေ ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးရတာ ဖြစ် လို့..ကိုယ်က စပြီး ၀ နေရင် ကိုယ် က စပြီး မျက်နှာ အသားအရည် မ လှပ ရင် ကျွန်မ တို့ စကား ကို Customer တွေက မယုံကြည်ပါ ဘူး…အဲဒါကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ် ကို ထိန်းဖို့အတွက် အစားအစာ ကို limit တစ်ခုနဲ့ ပဲ စားပြီး ကိုယ် အလေး ချိန် ကို စံနှုန်း တစ်ခု ထား အမြဲချိန် ပြီး တက်တာနဲ့ ချက်ချင်း သတိထားပြီး အစား ပြန်ဆင်ချင် ပါတယ်… မျက်နှာ အလှအပ အတွက်လည်း အပြင်က ပြန်လာရင် မိတ်ကပ် အမြဲ ဖျက်တာ၊ Skin Care တွေ ဂရုတစိုက် သုံးပေးတာ ….နေပူထဲ ထွက်ရင် နေရောင် ကာ Sun Cream တစ်မျိုးမျိုး သုံးပေး တာ….အစားအသောက်ဆင်ခြင်တာ.. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ သစ်သီးအမျိုးမျိုး စားတာ…ရေ များများ သောက် တာနဲ့ Facial Massage နဲ့Facial Treatment ကို မှန်မှန်လုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်း ပါတယ်… ဟုတ်ကဲ့…. အခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေကြား ပေးတဲ့ မစွဲမြတ်ဟေသီ ကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့…. ကျွန်မကလည်း မေးမြန်း ပေးတဲ့ MRTV-4 ကို ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်…..။
မျက်နှာ နဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် အဆီလာ ချသူများ ရဲ့ အကြံပြုချက်များ
အမှတ်(၆၃)သီတာလမ်း၊ကျောက်မြောင်း၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ ကျွန်မ က မွေး ကထဲ က ပါးဖောင်းလို့ ပါး ဖောင်းတာ နဲ့ မျက်နှာ မေးနှစ်ထပ် အဆီ လာချပါတယ်....(၁၀) ရက် မှာ သိသိသာသာ လျော့ ကျသွားတဲ့ အတွက် တစ်ကိုယ်လုံး အဆီချပါ ထပ်လုပ်ပါတယ်...အခုဆို မျက်နှာ က အဆီတွေလည်း ကျ ၊ ပါးအရမ်းဖောင်းတာလည်း သိ သိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး....Body လည်း သိသိသာသာ ပိန်သွားတဲ့ အတွက်...ကျန်းမာရေးလည်း သိသိသာသာကောင်းလာ ပါတယ်။ ကျွန်မလို ကျန်းမာလှပလာအောင် GINGER မှာ အဆီလာချကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ပါတယ်ရှင် ။ ဒေါ်လဲ့ယဉ်မြင့်
ခြံအမှတ် ( ၁ ) ရှင်စောပုလမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
မျက်နှာ အဆီချ ဆိုတာကို အစ က မျက်နှာကို ဆေးတွေထိုး ပြီး အဆီစုပ်ထုတ်မှာလားလို့ စိတ်ပူနေတာ နောက်မှ Cream အကောင်းစား တွေလိမ်းပြီး Facial စက် ကလေးတွေနဲ့ အဆီချေပြီး မျက်နှာကို နှိပ်ပေးတယ်မှန်း သိမှ စိတ်အေးသွားတယ်။ မလုပ်ခင် အရင်ဆုံး မျက်နှာ ကို အတိုင်းတိုင်းပါတယ်။ (5) ရက် မှာ တစ်ခါတိုင်း ပြီး ( 10 ) ရက် အကြာမှာ တစ်ခါ ထပ် တိုင်းပါတယ်။ 1 Course ( 10 ) ရက် ပြီးသွား တဲ့ အခါမှာ မျက်နှာက အဆီပို နဲ့ မေးနှစ်ထပ် အဆီတွေ သိသိသာသာလျော့နည်းသွားပြီး မျက်နှာ ပြင်တစ်ခုလုံး တင်းရင်း လာတဲ့ အပြင် အသားအရည်ပါ သိသိသာ သာ နုပြီး ကြည်လင်လာတာကိုကိုယ်တွေ့ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်များရှင်…..။ အရွယ်တင် နုပျိုတဲ့ မျက်နှာ ၊ လှပ စိုပြည်တဲ့ အသားအရည်နဲ့ အချိုးအစား ကျ တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင် ခြင်းက မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မှု ရှိစေပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် လည်း အထူး သင့်တော် ပါ တယ်…. ကျန်းမာပြီး လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချင်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အချိန် မပေး နိုင် တဲ့သူတွေ အတွက် အချိန်တို အတွင်း မှာ အဆီကျစေ ဖို့ အတွက် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အဆီပို မရှိဘဲ တင်းရင်း နုပျို လှပ တဲ့ မျက်နှာ အလှကို ပိုင်ဆိုင်လို တာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စနစ်ကျ တဲ့ နည်း ပညာ များ နဲ့ အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင် မှု တွေ ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်တဲ့ နေရာက တော့ Ginger ပါပဲရှင်။